Warka MOTOROLA: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Soosaarayaasha cusub ee Motorola Moto G Stylus 2021 waxay ka hadlaan qaab cusub
Sawirro cusub oo la soo rogay oo ka mid ah Motorola Moto G Stylus 2021 ayaa u muuqday mid muujinaya qaab naqshadaysan.
Kuwani waa noocyada 21 Motorola ee lagu cusbooneysiin doono Android 11
Motorola waxay ku dhawaaqday terminaalka loo cusbooneysiin doono Android 11 illaa 2021.
Moto G Stylus (2021) wuxuu u muuqdaa shirkadda Amazon waxayna muujineysaa xog cusub
Moto G Stylus (2021) wuxuu u muuqday Amazon USA isagoo kashifaya naqshadeeda iyo xogta cusub ee xaashida farsamada. Ogow waxtarkooda.
Motorola Nio waxay noqon doontaa taleefankii ugu horeeyay ee leh guddi 105 Hz ah
Motorola Nio waxay durbaba muujisay qeexitaankeeda koowaad waxayna muujineysaa heerka cusbooneysiinta shaashadda. Waxaan shaaca ka qaadaynaa wax walba oo isaga ku saabsan.
Sifeeyay naqshadeynta iyo qeyb ka mid ah astaamaha Moto E7
Muddooyinkii dambe Motorola ma joojin inay soo saarto alaabo cusub. Dhowr bilood ka hor waxaan kaala hadalnay Moto E7 Plus, oo ah terminaal leh ...
Moto G9 Power iyo Moto G 5G waxaa lagu shaaciyey shaashado waa weyn iyo baytariyada waaweyn
Motorola ayaa ku dhawaaqday Moto G9 Power iyo Moto G 5G, oo ah laba taleefannada casriga ah oo heer dhexe ah oo leh baytariyaal aad u waaweyn. Ogow dhammaan faahfaahinta labada terminaal.
Moto G 5G: astaamaha ugu muhiimsan iyo qeexitaankiisa ayaa xaday
Astaamaha muhiimka ah iyo qeexitaannada farsamo ee Motorola Moto G 5G ayaa la dusiyay. Waan ku ogeysiineynaa!
Moto G9 Plus wuxuu marayaa FCC oo muujinaya astaamo muhiim ah
Motorola wuxuu Moto G9 Plus ka gudbiyaa FCC waqtiga ka hor wuxuuna soo bandhigayaa astaamo qalab hardware muhiim ah, iyo sidoo kale batarigiisa.
Moto E7 waxaa lagu muujiyay side ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin
Moto E7 gabi ahaanba waa la dusay ka hor inta aysan soo bandhigin shirkadda, oo u bilaabi doonta qalab heer-gal ah.
Qeexitaanka ugu horreeya ee Moto G9 Play waxaa lagu arki karaa Geekbench
Geekbench wuxuu shaaca ka qaaday dhowr xaqiiqo oo xiiso leh oo ku saabsan qeexitaanka farsamo ee Motorola's Moto G9 Play, mid ka mid ah bartamaha soo socda.
Moto G 5G Plus waa rasmi: 6,7 ″ shaashad, isku xirnaanta 5G iyo ismaamul ilaa 2 maalmood
Motorola ayaa soo bandhigtay Moto G 5G Plus cusub, oo ah taleefan casri ah oo weyn oo wata batteri awood badan leh ilaa 2 maalmood oo ismaamul ah.
Motorola One Fusion ayaa lagu dhawaaqay: HD + Screen, Snapdragon 710 iyo Battery Capacity High
Motorola waxay soo bandhigtay One Fusion, oo ah taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah oo leh madaxbanaani aad u xun oo la sii daayay si ay u sii socoto in ka badan hal maalin.
Moto G 5G wuxuu la imaan doonaa Snapdragon 765 iyo 90 Hz guddi, waxaa jiri doona nooc kala duwan oo 'Plus' ah
Motorola ayaa soo bandhigi doonta laba taleefan oo cusub bisha July 7, mida hore waxay noqon doontaa Moto G 5G, halka uu jiri doono nooc nooc ah oo loo yaqaan 'Plus'.
Moto G wuxuu ku soo laabanayaa albaabka hore, tanina waa qaabkeeda
Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta koowaad ee Moto G,
Moto Edge Lite waxaa cadeeyay FCC: Waxay noqoneysaa taleefoon 5G ah
FCC waxay muujinaysaa qayb cusub oo ka socota Motorola, Moto Edge Lite. Tilmaamaha ugu horreeya ee suurtogalka ah ee taleefanka ayaa la yaqaan.
Jiilka labaad ee Motorola RAZR wuxuu dib ugu dhacay 2021
Jiilka labaad ee Moto RAZR, ayaa dib u dhigay daah-furkiisa illaa 2021, sababo la xiriira faafka cudurka ee sababay coronavirus
Moto G7 Play wuxuu bilaabmayaa inuu helo Android 10
Si tartiib tartiib ah, soo saaraha Mareykanka ee ay leedahay Lenovo wuxuu sii wadaa cusbooneysiinta qoyskiisa Moto G. Horey ayaan kuugu sheegnay ...
Moto G7 Power wuxuu bilaabmayaa inuu helo Android 10
Moto G7 Power wuxuu bilaabay inuu helo cusbooneysiinta Android 10 ee muddada dheer la sugayay, oo ah cusbooneysiin hadda laga heli karo kaliya Brazil
Motorola One Fusion + waa mobiil cusub oo wata kaamirada Snapdragon 730 iyo 64 MP oo lagu bilaabay wax kayar 300 euro
Motorola ayaa soo saartay taleefan casri ah oo cusub oo ay kujiraan Qualcomm's Snapdragon 730 chipset iyo 64 MP camera. Waxay u timaadaa sidii Hal Fusion +.
Motorola ayaa dhawaan ku dhawaaqi doonta Moto E LE cusub, oo ah aalad heer-gal ah oo qiimo soo jiidasho leh u leh suuqyada kala duwan.
Moto E 2020 iyo Moto G Fast waa rasmi: Labada heer ee cusub ee soo gala Android 10
Motorola waxay soo bandhigtay laba taleefan oo heer-gala ah oo cusub, Moto G Fast iyo Moto E 2020. Laba qalab oo wata Android 10.
Motorola RAZR 2 wuxuu imaan doonaa bisha Sebtember isagoo wata warkan
Waxaan horeyba u ognahay wararka xanta ah ee ugu horeeya ee laxiriira waxa uu noqon doono jiilka labaad ee taleefanka casriga ee isku laaban Motorola, RAZR
Moto G7 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10
Cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay ee ku saabsan Android 10 ee Moto G7 ayaa bilaabay in laga helo Brazil, laakiin waxay qaadan doontaa maalmo yar si ay u gaarto adduunka.
Motorola waxay rabtaa inaan u furno RAZR sida ugu yar ee suurtogalka ah cusbooneysiinta Android 10
Cusbooneysiinta Android 10 ee loogu talagalay Motorola RAZR ayaa noqotay mid la heli karo waxayna diiradda saareysaa bixinta waxqabad badan shaashadda bannaanka.
Moto Edge iyo Moto Edge + waa rasmi: Laba aalad oo cusub oo heer sare ah oo 5G ah
Motorola waxay soo bandhigtay Moto Edge cusub iyo Moto Edge +, oo ah laba taleefan oo casri ah oo kala geddisan. Labaduba waxay gaari doonaan suuqa Yurub.
Moto Edge + wuxuu ka muuqdaa shaashad rasmi ah oo shirkadda ah, waxaa la soo bandhigi doonaa Abriil 22
Motorola waxay ku dhawaaqi doontaa Moto Edge iyo Moto Edge + usbuuc gudihiis. Waan ognahay qeexitaannada ugu horreeya ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin.
Verizon's Moto Z4 ugu dambeyntii wuxuu helayaa Android 10
Verizon hadda waxay siineysaa xirmo cusub oo loo yaqaan 'Android 10 firmware' oo loogu talagalay cutubkeeda dhexe ee xiran ee Moto Z4.
Motorola One wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
Android 10 wali ma wada gaadho telefoonada oo dhan, laakiin inyar oo ka mid ah ayay qabataa, haddana waxay eegtay Motorola One.
Moto G8 Power Lite wuxuu muujinayaa helitaankiisa iyo qiimaha qadka
Moto G8 Power Lite ayaa lagu muujiyay dhowr sawir kahor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin, sidoo kale qiimaha iyo helitaanka waa la yaqaan.
Motorola's Moto Z4 wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta Android 10
Motorola waxay bilawday inay siiso cusboonaysiinta Android 10 Motorola's Moto Z4 iyada oo loo marayo OTA cusub oo ku baahsan adduunka.
Motorola Moto Edge + waxyaabaha kamaradaha lagu baaro ayaa baxsad ah: Dareeraha 108 MP ee aragga
Xog cusub oo ku saabsan Motorola Moto Edge + ayaa soo shaac baxday. Midkani wuxuu ka hadlayaa qeexitaanka kamaradahaaga.
Motorola's Moto G Stylus qaawan: qeexitaankiisa ugu muhiimsan ayaa la muujiyay [+ Renders]
Astaamaha ugu muhiimsan iyo tilmaamaha farsamo ee Motorola Moto G Stylus ayaa la daadiyay iyadoo ay la socdaan sawirro qaarkood.
Gorgortanka maalinta: hel ugu qiimo jaban Motorola One Action 100 euro
Ha moogaanin gorgortan si aad ugu iibsato Motorola One Action qiimaha ugu fiican. Oo, hadda waxaad ka heli kartaa 100 euro oo ka jaban Amazon.
Motorola Moto Z5 oo loo maleynayay ayaa lagu caddeeyay batari weyn oo ah 5000 Mah Mah
Xogo cusub ayaa ka soo baxay keydka hey'adda ansixinta FCC. Waxay ahayd Moto Z5 loo maleynayay in la caddeeyay.
Motorola waxay ku dhawaaqeysaa dhacdo ka dhaceysa magaalada Barcelona bisha Febraayo 23deeda
Motorola waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto dhowr aaladood oo mobiil ah ka hor bilowga dhacdada Mobile World Congress 2020 ee magaalada Barcelona.
Motorola Razr wuxuu imaan doonaa Spain bisha Janaayo
Sannadka aan dhamaynayno wuxuu ahaa sanadkii mobilada isku laaban. Samsung ayaa horay loo soo bandhigay ...
Nooca xasilloon ee Android 10 wuxuu yimaadaa Motorola One Power
Motorola One Power waxay si tartiib tartiib ah u heli doontaa noocii ugu dambeeyay ee Android ee wadamada kala duwan ee ay ku taal.
Motorola One Macro waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Motorola One Macro ee dalka Spain iyadoo shirkadda lafteeda si rasmi ah ugu dhawaaqday boggeeda.
Motorola waxay cusbooneysiineysaa heerkeeda dhexe iyo soo galkeeda iyadoo la socota Moto G8 Plus iyo Moto E6 Play
Motorola ayaa hada soo bandhigtay Moto G8 Plus si loogu tartamo bartamaha iyo Moto E6 Plus, oo loogu talagalay soo gelitaanka. Dhammaan faahfaahinta ku jirta qodobkan.
Lenovo ayaa qorsheyneysa inay soo saarto taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah ka hor dhamaadka sanadka kaas oo loogu yeeri doono Motorola One Hyper.
Moto E6s ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee 'Moto E6s', taleefanka cusub ee hooseeya ee ka socda Motorola oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Moto E6s waxaa si rasmi ah loo sameyn doonaa bisha soo socota ee Sebtember 16
Lenovo wuxuu dib-u-habeyn ku sameeyay taxanaha Moto E dhawaan oo ahayd bishii Luulyo isagoo wata Moto E6 cusub. Terminalkani waa kan ugu raqiisan ...
Motorola si ay dib ugu soo celiso taleefanno heer sare ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka Motorola ee ah inay dib-ugu-soo-celiyaan taleefannada dhammaadka-dhamaadka sida uu xaqiijiyay sarkaalkeeda suuq-geynta horayba.
Motorola One Macro ayaa ku jirta horumar, sida ku cad shahaado dhowaan la siiyay
Motorola diiradda kama saarin inta ugu badan ee Moto G kala duwan sidii sanadihii la soo dhaafay. Saxiixa, inkasta oo ...
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Motorola One Zoom oo si rasmi ah uga socda dalka Spain nooca ay la socoto Amazon's Alexa oo ah kaaliye.
Motorola One Zoom: Khamaarista heerka dhexe ee sawir qaadista
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Motorola One Zoom oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019 ee magaalada Berlin oo aan wax walba ka ognahay.
Tilmaamaha Motorola One Zoom ayaa xaday
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Motorola One Zoom oo horeyba si rasmi ah loogu faafiyey taasna lagu soo bandhigo IFA 2019.
Motorola One Action waxaa laga bilaabay Spain
Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan suuq-geynta suuqa ee Isbaanishka ee Motorola One Action oo aan horey ugu iibsan karno dukaamada.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Moto E6 Plus
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sawirradii ugu horreeyay ee laga sii daayay Moto E6 Plus oo noo oggolaanaya inaan aragno naqshadeynta taleefankan sumadda leh.
Telefoonka casriga ee isku laaban Motorola, RAZR 2019, ayaa ka jaban doona noocyada Samsung iyo Huawei
Marka loo eego xogaha ugu dambeeya, Motorola RAZR 2019 waxay lahaan doontaa qiime qiyaastii ah 1500 euro wuxuuna gaari doonaa suuqa dhamaadka 2019.
Xog cusub oo laga sii daayay Motorola RAZR 2019
Soo ogow xogta cusub ee laga dusay Motorola RAZR 2019 oo umuuqata inay durba waxyar kadhowdahay inay gaaraan suuqa waxayna keeneysaa isbadalo.
Motorola One Action: Taleefanka cusub ee Android One
Soo ogow faahfaahinta buuxda ee Motorola One Action oo horeyba loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Brazil dhawaana soo socota.
Motorola One Action waxay horey u laheyd taariikh bandhig
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan soo bandhigida Motorola One Action oo taariikhdeeda ay horeyba shirkadda lafteeda u xaqiijisay shabakadaha bulshada.
Dhammaan qeexitaannada farsamo ee Motorola One Zoom ayaa soo baxay
Motorola One Zoom ayaa noqon doonta taleefanka casriga ah ee soo socda ee Lenovo soo bandhigi doono. Kahor intaysan taasi dhicin, dhammaan qeexitaannada xaruntan ayaa la dusiyay.
Moto E6: Qaabka ugu jaban ee Motorola
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilawga Moto E6 suuqa, taleefanka cusub ee hooseeya ee ka socda Motorola oo horeyba loo soo bandhigay.
Motorola One Action wuxuu ka muuqdaa Android Enterprise, iyo dhowr qeexitaankiisa sidoo kale
Motorola One Action waxaa ku taxan barnaamijka Google ee lagu talinayo ee Android. Tilmaamaheeda ugu muhiimsan waa la faahfaahiyay.
Tani waa qiimaha rasmiga ah ee Motorola P50 yeelan doonaan
Qiimaha Motorola P50 waxaa si rasmi ah looga dhigay munaasabad iib ah. Waxay lahaan doontaa isla nidaamka qiimeynta ee aan horay ugu barnay.
Soo bandhigida iyo qeexida muhiimka ah ee Motorola P50 ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay
Madaxweyne ku xigeenka Lenovo Chang Cheng ayaa soo saaray inta badan waxyaabaha Motorola P50 qeexitaankiisa, iyo waliba goorta la sii deyn doono.
Motorola's Moto Z4 wuxuu heli doonaa Android Q oo ah casriyeyntii ugu dambeysay ee ugu dambeysay
Android Q wuxuu noqon doonaa noocii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka casriga ah ee Google si loo helo heerka dhexe ee Moto Z4.
Soosaarayaasha cusub ee Moto E6 ayaa u muuqda kuwa muujinaya oo xaqiijinaya dhammaan nashqaddiisa
Sawirro yar oo cusub oo la soo rogay oo ka mid ah Motorola Moto E6 ayaa soo ifbaxay. Kuwani waxay xaqiijinayaan naqshaddii horay loo sifeeyay ee mobilada heerka gelitaanka.
Motorola One Action waxaa si buuxda loogu arkaa sawirro cusub oo la soo rogay
Terminalka xiga ee Lenovo ee la furayo wuxuu noqon doonaa Motorola One Action, oo ah taleefan casri ah oo aan horey uga soo hadalnay ...
Motorola One Action Noocyadiisa Oo Buuxa Oo Xog Culus Ah Sii Daayay Kahor Launch
Faahfaahinta buuxda ee Motorola One Action ayaa soo shaac baxday, waxaanan ku muujinaynaa fursaddan cusub. Baro dhammaantood!
Geekbench wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ee Moto E6 Plus
Moto E6 Plus waa taleefan casri ah oo soo socda kana soo baxaya nooca ay leedahay shirkadda Lenovo oo hadda laga diiwaan galiyay keydka Geekbench.
Motorola waxay xaqiijineysaa inaysan sii deyn doonin Moto Z4 Force ama Moto Z4 Play
Motorola waxay si rasmi ah u xaqiijisay inaysan fureyn taleefannada casriga ah ee Moto Z, sidaa darteed Moto Z4 Force iyo Play suuqa ma soo geli doonaan.
Motorola One Action waxay mareysaa Geekbench waxayna muujineysaa qaar ka mid ah faahfaahinteeda
Motorola One Action waxay u horseedday astaanta Geekbench. Halkaas ayay ku soo bandhigtay qaar ka mid ah astaamaheeda iyo tilmaamaha farsamo.
Moto Z4 wuxuu si rasmi ah ula socdaa Snapdragon 675 iyo shaashadda 6,4 ″ OLED
Telefoon isku dheelitiran qaabkiisa oo aan u naqaanno Motorola's Moto Z4. Bisha Juun ayaa la iibin doonaa si ay awood ugu yeelato inay hesho.
Moto Z4 wuxuu ku sii jeedaa Geekbench oo leh Snapdragon 675
Motorola's Moto Z4 ayaa lagu soo bandhigay Geekbench, oo ah barxada tijaabada ee internetka. Halkaas qalabku wuxuu xaqiijiyay qaar ka mid ah qeexitaankiisa.
Motorola mar labaad ayey faa'iido leedahay Motorola One iyo Moto GX
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga wanaagsan ee Motorola oo mar labaad faa'iido leh iyada oo ay ugu mahadcelinayaan laba nooc oo taleefano ah oo ku jira buugiisa.
Motorola One Vision: Jiilka labaad ee wata Android One waa rasmi
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Motorola One Vision, jiilka labaad ee sumadda leh Android One oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Lagu shaandheeyey dhammaan sifooyinka iyo sawirrada Motorola One Vision oo leh shaashad dalool leh
Faahfaahin dheeraad ah iyo turjumaad cusub ayaa ka soo baxay Motorola One Vision, oo sidoo kale la socota bandhig daloolin iyo Android One.
Astaamaha iyo tilmaamaha Moto Z4 waxaa lagu xaqiijiyay daadadkeeda cusub
Daadinta cusub ayaa xaqiijineysa dhammaan qeexitaannada iyo astaamaha ka dusay Motorola Moto Z4 oo muddo dheer la sugayay.
Shaandheeyey soo dejiyaha Moto E6, mobilka soo socda ee Motorola ee kula dagaallami doona heerka hoose
Moto E6-ka waxaa hadda la wadaagay 91Mobiles, oo sheegtay inay si gaar ah u eegeen iyaga. Aan aragno xiga!
Shaandheeyey qeexida iyo qiimaha Moto Z4 iyo Z4 Force
Faahfaahin kala duwan iyo qiimaha Moto Z4 ayaa la shaaciyay. Intaa waxaa dheer, qeexitaannada muhiimka ah iyo qiimaha Moto Z4 Force ayaa sidoo kale la dusiyay.
Aragtida Motorola One waxay horey u leedahay taariikh soo bandhigid
Soo ogow wax kasta oo aan ilaa iyo hadda ka ognahay Motorola One Vision, oo taariikhdeeda soo bandhigisteeda si rasmi ah loo xaqiijiyay.
Kuwani waxay xaqiijinayaan naqshadda taleefanka isku laaban ee Motorola
Naqshaddii taleefanka is rogroga ee Motorola ayaa la helay. Oo hadda, waxaan xaqiijin karnaa waxa RAZR V4 u ekaan doono marka lagu daro qalabka ay yeelan doonto.
Moto G6 iyo Moto G6 Play waxay bilaabayaan inay helaan beta-ka Android Pie
In kasta oo taxanaha Motorola Moto G7 uu ku dhow yahay geeska, Motorola ma uusan illaawin ...
Liisaska rasmiga ah ee lagu eedeeyay ayaa daadanaya qeexitaannada buuxa ee taxanaha Moto G7
Liiska rasmiga ah ee loo maleynayo inuu qeexayo ee taxanaha Moto G7 ee soo socda ee Lenovo ayaa la xaday. Astaamaheeda muhiimka ah ayaa la muujiyay.
Moto G7 horeyba wuxuu u lahaa taariikh soo bandhigid
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee Motorola Moto G7 oo si rasmi ah loogu soo bandhigi doono bisha Febraayo 7 Brazil.
Patent wuxuu muujinayaa nashqadda Moto RAZR, Motorola taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee isku laaban
Xuquuqda lahaanshaha sirta ah ee sirta ah ayaa na tusaysa nashqadda taleefanka laysku laaban karo ee Motorola, Moto RAZR laabma oo si weyn loo filayo oo lagu soo bandhigi doono MWC 2019
Ciyaarta Moto G7 waxay mareysaa Geekbench oo ay la socoto Snapdragon 625 oo saaran
Moto G7 Play ayaa lagu daadiyay Geekbench oo ay saaran tahay octa-core Snapdragon 625. Waxaa la filayay inuu la yimaado SD632.
Sawirro toos ah oo laga helay Moto G7 Power iyo faahfaahin kale ayaa la helay
Sawirada dhabta ah ee tooska ah ee Moto G7 Power ayaa soo ifbaxay iyadoo ay weheliso qiimaha ay lahaan karto reer Brazil. Ogow faahfaahinta!
Soosaarayaasha cusub ee taxanaha Moto G7 ayaa xaday: qiimaha ayaa sidoo kale la muujiyay
Faahfaahin cusub iyo faahfaahinta qiimaha ee taxanaha Moto G7 ee soo socda ee Lenovo ayaa la xaday. Waan ku ogeysiineynaa!
Naqshadeynta Motorola P40 iyo Moto Z4 Play oo ay weheliyaan astaamahooda ayaa lagu soo daadiyay usbuucii hore ...
Motorola One wuxuu bilaabaa inuu helo Pie Android gudaha Mexico
Android 9.0 Pie ayaa durbaba u imanaya Motorola One ee ku taal Mexico iyada oo loo marayo cusbooneysiin la socota nabadgelyada bisha Nofeembar.
Astaamihii ugu horreeyay ee Moto Z4 waa la sii daayay, oo ah calanka xiga ee shirkadda Mareykanka ee ka dhex muuqan doonta processor-keeda Snapdragon 855.
Motorola Moto One ayaa hadda laga heli karaa dalka Mareykanka
Motorola Moto One ayaa hadda laga heli karaa Mareykanka. Ogow faahfaahinta qiimaheeda iyo helitaankeeda.
Motorola waxay diiwaan galisay xeedho tii ugu horreysay ee wireless ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan xarkaha fiilada wireless-ka ee ay Motorola bilaabi doonto, oo ay weheliso taleefankeedii ugu horreeyay ee lacag-la'aanta ah.
Ma rabtaa inaad iibsato mobiil raqiis ah? ka faa'iideyso dalabyadan Motorola
Motorola ayaa daaqada ka tuurtay iyadoo u soo bandhigtay dalabyo qaar ka mid ah Amazon oo noo ogolaanaya inaan ku iibsano mobiil raqiis ah: Moto G5 oo ka yar 115 euro
Motorola RAZR: Kani wuxuu ahaan lahaa taleefanka isku laaban ee sumadda
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee laaban karo ee Motorola, kaasoo ku yimid magaca RAZR. Telefoon la laaban karo oo leh qaab gadaal ah.
Motorola One wuxuu dhex maraa TENAA wuxuuna muujiyaa naqshadiisa iyo astaamaha ay leedahay
The Motorola One ayaa kaliya ku soo wareegay dalxiis TENAA. Soo ogow naqshada iyo dhammaan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee lagu muujiyay taleefankan!
Leaked Motorola One Features: OS, RAM, iyo Xawaaraha Processor-ka ayaa la muujiyay
Motorola One ayaa kaliya ka soo muuqday Geekbench oo ay weheliyaan qaar ka mid ah astaamaha farsamo ee muhiimka ah. Ogow waxa moobaylkani la imaan doono!
Xaday sawiro cusub iyo qeexitaanada Motorola One Power
Qeexitaanno cusub oo xaday oo ku saabsan Motorola One Power. Raadi wax badan oo ku saabsan nooca cusub ee taleefanka Android One.
Moto P30 waa rasmi: Motorola taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee qariidad ah
Moto P30: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan Motorola taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee maanta la soo bandhigay.
La shaandheeyey tixgelinta ugu horreysa ee Motorola Moto P30. Iyaga mahadsanid waxaan leenahay fikrad cad oo ku saabsan nashqadaynta taleefanka kaas oo yeelan doona wargelin ballaaran
Moto P30 cusub ayaa la soo bandhigi karaa Ogosto 15
Motorola wuxuu soo bandhigi doonaa Moto P30s bisha Ogosto 15. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyadan cusub ee taleefannada ka raadi sumadda, oo dhowaan iman doonta.
Motorola kama tagi doono Moto Mods
Motorola ma dayri doono horumarka Moto Mods. Raadi wax badan oo ku saabsan shirkadda xaqiijinta inay sii wadi doonto inay ka shaqeyso Mods Mode.
Ogeysiis: ma jiri doonaan taleefannada Moto Z ee sannadkan
Motorola ayaa hada shaacisay inaysan jiri doonin aalado Moto Z ah sanadkaan. Tan waxaa lagu dhawaaqay waxyar kadib soo bandhigida Moto Z3.
Moto Z3 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta, dareeraha faraha ee dhinaca iyo Moto Mod ee shabakadda 5G.
Motorola Moto Z3 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 2 si rasmi ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda xareynta shirkadda ay dooratay.
Astaamaha ugu muhiimsan ee Motorola One Power kadib markii ay soo mareen TENAA
Motorola, oo ah shirkad ay heshay Lenovo dhawr sano ka hor, ayaa waxay inagu soo bandhigaysaa qalab cusub: Motorola One Power, oo ah qeybta dhexe ee soo socota ee Motorola One Power waxaa cadeeyay TENAA. Baro wax badan oo ku saabsan qeexida rasmiga ah ee qalabkan dhexda.
Moto C2 iyo C2 Plus horey ayaa loo xaqiijiyay
Moto C2 iyo C2 Plus ayaa laga caddeeyay dalka Brazil. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee suuqa soo gali doona dhowaan.
Qiimaha Moto G6 iyo noocyadi u dambeeyay ee xaday
VLEAKS waxay noo keentaa shaashadda Moto G6 ee Amazon -page oo moobilkan loo diyaariyey inuu daadiyo muddo aad u yar ka hor inta aan laga saarin- taas oo muujinaysa astaamo kale oo dhowr ah oo moobiilkan oo dhowr ka mid ah la xaqiijiyay oo aan horay u haysannay. ku ogeysiinaayay. Waan ku tusaynaa!
Ilaa Abriil ma arki doonno Motorola cusub ee 2018
Shirkadda Aasiya ee Motorola waxay soo bandhigi doontaa alaabteeda cusub ee kala duwan ee 2018, bisha Abriil ee soo socota, halkaasoo Moto G Series ay noqon doonto soo jiidashadeeda ugu weyn.
Android N ee loogu talagalay Motorola G4 iyo G4 Plus waxaa horeyba u tijaabiyay tijaabiyaasha beta
Android N waxaa hadda lagu tijaabinayaa Motorola G4 iyo G4 Plus, markaa ha filanin cusbooneysiinta OTA ugu yaraan laba bilood
Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, isbedelka.
Eeg sida mid ka mid ah moodooyinka ugu guulaha badan uu uga soo dhexbaxay dhex-dhexaadka ballaaran ee taleefannada casriga ah xilligan
Moto G4 Vs Moto G5, horumar aan kala go ’lahayn
Kadib soo bandhigida Moto G5 cusub ee Motorola - Lenovo, waxaan ku sameynay falanqeyn isbarbardhig ah qaabkii kahoreeyay, Moto G4
Moto G 5 iyo Moto G 5 Plus waa cusub oo awood dhexdhexaad ah leh
Waxaan soo bandhigeynaa sharadka Lenovo oo leh noocyadeeda cusub ee Motorola Moto G5 iyo Motorola Moto G 5 Plus, ma lahaan doonaan guulaha kuwii ka horreeyay?
Moto G5 iyo Moto G5 Plus Tilmaamaha, Naqshadaynta iyo Soo Bandhigida
Moto G5 iyo Moto G5 Plus ayaa si qalad ah uga soo muuqday dukaan internetka ah waxaana loo ugaarsaday inay awoodaan inay wadaagaan sawirada iyo astaamaha farsamada.
Motorola Moto Z Play wuxuu u muuqdaa 3,5mm soo saarida qalabka codka
Milkiilayaasha Motorola Moto Z Play waxay awoodi doonaan inay sameeyaan iyadoon la iibsanin sameecadaha dhagaha iyagoo haysta aaladda maqalka ee 3,5 mm ah.
Moto G4, falanqeyn iyo ra'yi bil kadib isticmaalkeeda
Falanqeyn dhameystiran oo leh dib u eegis fiidiyow ah oo Isbaanish ah oo ah Moto G4, taleefan cusub oo ka socda Motorola (Lenovo), taas oo la yaab leh shaashadeeda 5.5 "iyo waxqabadka wanaagsan
Moto X Force, falanqeyn iyo ra'yi kadib isticmaalkeeda muddo seddex bilood ah
Falanqaynta dhameystiran ee Moto X Force ka dib isticmaalkeeda muddo seddex bilood ah; mid ka mid ah taleefannada ugu awoodda badan uguna adkaysiga badan suuqa.
Moto sidoo kale wuxuu u socdaa qaab muuqaal ah Moto Z
Moto Z wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo leh astaamo qaabaysan sida LG G5 iyo modulladaas ay la timid.
War saxaafadeed Moto G4 ah ayaa la sifeeyaa hal maalin ka dib soo bandhigidiisa
Berri Moto G4 ayaa lagu soo bandhigi doonaa Hindiya maantana waxaan haynaa qarsoodi ah sawirka saxaafadda ee taleefankan.
The DROID Turbo 3 iyo Moto X 2016 si wada jir ah ayaa loo sifeeyey
Xogta la daadiyay waxay ka timid dhowr taleefan oo Motorola ah oo calaamadeyn doona qayb ka mid ah buug-yaraha sanadkan si loogu soo diro boosteejooyinka korontada daahirka ah ee Android.
Moto X 2016 wuxuu ka muuqdaa jaangooyooyin leh Snapdragon 820 chip iyo 4GB oo RAM ah
Laga soo bilaabo GeekBench, Moto X 2016 loo maleynayay ayaa lagu taxay, kaas oo yeelan doona qalab Snapdragon 820 iyo 4 GB RAM.
Wax walba oo aan ka ognahay illaa iyo hadda ku saabsan Moto G 2016 cusub
Waxaan soo aruurineynaa wax kasta oo aan illaa iyo hadda ka ognahay Moto G 2016 cusub iyo qeexitaankiisa farsamo iyo qiimaha rasmiga ah ee lagu bilaabi karo.
Muuqaalada qaar ee Moto G4 waa la sifeeyey oo muujinaya akhristaha faraha
Laba sawir oo Moto G 2016 ah ayaa soo daadanaya oo aad ka heli karto meesha loogu talagalay dareeraha faraha iyo kamaradda gadaasha.
Sawirada Moto X cusub (2016) iyo Moto G (2016) ayaa soo baxaya
Sannadkan waxaa jiri doona xoogaa isbeddel weyn ah Moto X cusub iyo Moto G xagga dambe oo leh "Moto by Lenovo"
Xanta ugu horeysa ee ku saabsan tilmaamaha suurtagalka ah ee cusub ee Moto G4
Lix bilood ka hor Motorola waxay soo bandhigtay noockeedii saddexaad ee Motorola Moto G, oo dib loogu soo celiyay bishii ...
Dib-u-eegista Fiidiyowga ee Isbaanishka ee Moto X Style, Motorola-dhamaadka sare ee u qalanta miisaankiisa dahab
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib-u-eegidgan fiidiyowga ah ee ballaaran ee Isbaanishka ah ee Moto X Style kaas oo aan ku tusinayno fiidiyow ka badan 26 daqiiqo oo dherer ah, wax kasta oo shirkadda Motorola ee ugu qiimaha badan ay na siiso.
Moto X Force, taleefanka ugu adag Motorola
Motorola waxay soo bandhigtay terminalkeeda ugu adkeysiga badan, Moto X Force.
Motorola Moto X Force ayaa ka badbaaday dhicitaan dhan 275 mitir
Soo-saareyaal badan ayaa sharad ku bixinaya bixinta qalab u adkaysta naxdinta iyo dhicitaanka. Laakiin Motorola horeyba ...
Tani waxay noqon kartaa dhabarka Moto X 2016
Sawir dhabarka Moto X 2016 ayaa muujinaya qaar ka mid ah wararka in aaladda soo socota ee soo saaraha Mareykanka ay yeelan karto.
Tijaabadan adkeysiga ah waxay muujineysaa in Moto X Force ay runti adagtahay in laga baxo
Markii la arkay tijaabadii ugu dambeysay ee iska caabin ah ee lagu sameeyay Moto X Force waxaa iska cad in taleefanka cusub ee Motorola uu yahay qalab runtii iska caabiya.
Moto X Force waa astaanta lama filaanka ah ee Motorola la waayey
Motorola wuxuu soo bandhigayaa Moto X Force, mobiil ujeedkiisu yahay iska caabin iyo labadiisa maalmood ee nolosha batteriga.
Droid Turbo 2 iyo Maxx 2 ayaa lagu xaqiijiyay daadinta
Motorola waxay noo keeni doontaa Oktoobar 27 laba DROID cusub: Droid Turbo 2 iyo Droid Maxx 2 oo leh shaashad aan la jabin karin sida ay sheegato.